China Ebube Ebube Ederede China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ebube Ebube Ederede - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ebube Ebube Ederede)
Nke a Mgbasa Ozi n'èzí n'èzí 150W bụ nnọchi anya maka 400W HID ma ọ bụ HPS Fixtures. Zọpụta ike, ego, na oge site na-eme ka ọkụ ọkụ gaa na ọkụ. Na 150 Watts na ọnụ ọgụgụ lumen nke 19500, ogige ntụrụndụ, ebe ndị na-adọba ụgbọala, ebe egwuregwu na n'okporo ámá ga-anọgide na-enwe nchebe ma na-egbukepụkwa na...
Post Top 150W Black LED Done Light
Nke a 150W LED Pole Top -18000lm bụ nnọchi anya maka 400W HID ma ọ bụ HPS Fixtures. Zọpụta ike, ego, na oge site na-eme ka ọkụ ọkụ gaa na ọkụ. Na 150 Watts na ọnụ ọgụgụ lumen nke 19500, ogige ntụrụndụ, ebe ndị na-adọba ụgbọala, ebe a na-egwu egwuregwu na n'okporo ámá ga-anọgide na-adị mma ma na-egbuke egbuke na...
150w Onyinyo Aluminom Post Top Light
Nke a 150w Onyinyo Aluminom Post Top Light bụ nnọchi anya maka 400W HID ma ọ bụ HPS Fixtures. Zọpụta ike, ego, na oge site na-eme ka ọkụ ọkụ gaa na ọkụ. Na 150 Watts na ọnụ ọgụgụ lumen nke 19500, ogige ntụrụndụ, ebe ndị na-adọba ụgbọala, ebe egwuregwu na n'okporo ámá ga-anọgide na-enwe nchebe ma na-egbuke egbuke...
Nke a 150w LED Pole Light 4000k bụ nnọchi anya maka 400W HID ma ọ bụ HPS Fixtures. Zọpụta ike, ego, na oge site na-eme ka ọkụ ọkụ gaa na ọkụ. Na 150 Watts na ọnụ ọgụgụ lumen nke 19500, ogige ntụrụndụ, ebe ndị na-adọba ụgbọala, ebe egwuregwu na n'okporo ámá ga-anọgide na-enwe nchebe ma na-egbuke egbuke na nke a LED...
Nke a 150w Mere Light Post Top Commercial fixtures bụ kpọmkwem anọchi 400W zoro ma ọ bụ HPS fixtures. Zọpụta ike, ego, na oge site na-eme ka ọkụ ọkụ gaa na ọkụ. Na 150 Watts na ọnụ ọgụgụ lumen nke 19500, ogige ntụrụndụ, ebe ndị na-adọba ụgbọala, ebe egwuregwu na n'okporo ámá ga-anọgide na-enwe nchebe ma na-enwu...
150w 19500Ọbụrụ na-eme ka ìhè dị elu
Ebube Ebube Ederede 150W Ebube Ebube Ederede Ebube Ederede Ebube Ebube Ebube Ebube Gburugburu Ebe Ederede Ebube Ebube Egwu 50W Ebube Ebube Ebube Ebube Ebube Ebube 150w